जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वडिआइजीको सजाय किन घटाइयो ? | Citizen Post News
जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वडिआइजीको सजाय किन घटाइयो ?
२०७७ साउन ४ गते ०८:१०
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोराइलाको सजाय सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय घटाइदिएको छ । आफ्नै श्रीमती हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका पूर्वडिआइजी कोइरालाको सजाय घटाएको सम्वन्धमा सामाजिक सञ्जालभर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको विभत्स हत्या गरेका कोइरालालाई सजाय घटाएर सर्वोच्चले गलत नजिर स्थापित गरेको आरोप लागेको छ । कोइरालाले साढे ८ बर्षअघि श्रीमती ढकालको हत्या गरेर शवलाई प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरस्थित टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई लागो लगाएर जलाएका थिए ।
त्यति ठूलो अपराधमा मुछिएका पूर्वडिआइजी कोइरालाले भोगिरहेको सजाय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैद सजाय घटाइदिएको हो ।
सर्वोच्चले हत्या हुनुको कारण समेत ढकाल आफै भएको भन्दै जन्मकैद सजाय घटाएर ८ बर्ष ६ महिना बनाएको हो । योसँगै पूर्वडिआइजी कोइरालाले छिट्टै जेल जीवनबाट छुटकारा पाउनेछन् ।
श्रीमती ढकालको हत्या अभियोगमा पूर्वडिआइजी कोराइला २०६८ साल माघ ८ गते जेल चलान भएका थिए । सर्वोच्चले जन्मकैदलाई घटाएर ८ बर्ष ६ महिना बनाएसँगै उनी अब यही साउन ८ गते जेलबाट रिहा हुने निश्चित भएको छ । फोटोः गुगल फाइल